Ma waxaad tahay lover ah ee dibadda ku weyn? Waxaan ka hadleynaa kaymaha, harooyinka, dhirta iyo ugaarta. tug, baaskiilka, iyo wanaaggii guud hawo cusub. Markaas ogaado ugu seerayaasha qaranka quruxda badan ee Europe, iyo sidaad u tagi karto tareen.
In kastoo booqanaya dabiiciga ah soo jiidashada sida kaymaha sida uu noqon karaa mid adag on a safarka tareenka, in ay jirto sabab in ay iyaga saaro. Kuwani waxay soo jiidashada dabiiciga ah bixiyaan duwan ku fiican in mashquul ah magaalooyinka, iyo iyadoo qayb ka ah cilmi-baarista waxaad ka heli doontaa inay la yaab ku haboon si ay u gaaraan iyadoo la kaashanayo Save A tareenka.
In kasta oo ay magaca wareersan, Saxon National Park Switzerland waa mid aad u badan Germany. Waa gobolka wayn dabiici ah in xuduud la galbeed Czech Republic. Waa kaliya park qaranka ee dalka dhagax weyn, laakiin waxa ay sidoo kale la daboolay kaymaha u fiican. madaxa badan oo gobolka si ay tug, laakiin waxaa kale oo ay u taariikh xiiso si ay u sahamiyaan, oo ay ku jiraan Fortress Konigstein ah.
Inta aad ku jirtid Germany, waxaanu kuu soo jeedinaynaa waxa kale oo aad booqan ah Black Forest. Waxaa laga yaabaa in bartamaha kaynta ugu caansan Yurub, tani ma aha mid ka maqnaan doona. Tani gobolka buuraleyda cajiib ah oo ku yaalla koonfurta-galbeed Germany waxa oo dhan ku leeyahay - kaymaha canbaha cufan, riwaayado buuraha, iyo tuulooyinka quaint. Waa dib in saacadaha cuckoo shukaansi in 1700, iyo tuulooyin badan dareento xasaasiyad wakhti aad u fog. The jawi cirfiid-Sheeko laftiisa yaridda dhammaataan in escapism buuxa dunida dhabta ah, haddii taasi waxa weeye waxa aad raadineyso weeyna!
Mid ka mid ah hababka ugu fiican in waayo-aragnimo Forest Black waa tareen. The line Black Forest waddaa dhexeeya Offenburg iyo Konstanz. Waxay bixisaa views cajiib ah gobolka iyo istaago in dhowr magaalo oo jidka.
Hallerbos Forest, ama "The Blue Forest", uu duud yahay cajiib fiican dheer muuqaal dabiici ah tug. The Gogol badan bluebells oo arbushin ilaa in bartamihii bishii April sannad kasta siin magacaaga u kaynta quruxda badan. Waxaa sidoo kale jira geedaha Rafaa Sequoia in loo sameeyo booqasho uu ku this stretch quruxda badan ee dalka aragnimo noolaynta.
Ogsoonow in waqtiga ugu fiican in ay soo booqdaan Hallerbos inay soo qabtaan bluebells waa kala duwan sanad kasta oo ku xiran tahay cimilada. The si degdeg ah heerkulka soo baxdo, ee si degdeg ah ubaxa Bloom. Haddaba noqon lahaa waqti fiican si ay u tagaan, sida waxa ay u muuqataa sanadkan si ku helay diiran yara dambayn bartamihii April. Laakiin waa tartan kula jira waqtiga sida cimilada diiran Waxa kale oo ka dhigan tahay in geedaha ay dib u helaan caleemo ay, diiday ka bluebells qoraxda, taas oo iyaga ka dhigaa inay u jeestaan ​​grayish. No u fiican tahay xiisaha Instagram!
Haddii aad tahay qorshaynta Dilal kala dheer, hubi in ay alaabahooda a pole kalluumaysiga: biyaha halkan waxaa gurguurta oo kalluunka. Fans of reindeer will find that Hardangervidda is among the best national parks for them, sida lo 'ay yihiin qaar ka mid ah ugu weyn dunida oo dhan. Ma jiraan wax iska sida daawashada kun oo dhaqaaqo Deerada ee wada noolaanshaha ee guud ahaan bannaanka; waxa qof walba indhaha ku fiiri waa in mar ka mid ah noloshooda.
Marka aad tahay ee Oslo, aad u baahan tahay si aad u hesho in ay Hardangervidda tareen Waxaad qaadan kartaa tareenka ka Oslo in Bo ee Telemark. From waxaa aad qaadi karto “Haukeliekspressen” si Rauland. Waxaad kaloo qaadan kartaa Bergen Tareenka ka soo Oslo in tiro ka mid ah meelaha in ay yihiin halka uu ka bilaabayo weyn Sahamin Hardangervidda - https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fflam-to-myrdal-norway%2F%3Flang%3Dso, Finnish, Haugastol, Ustaoset iyo Geilo.
From Bergen in Hardangervidda tareen The Bergen Railway stops at number of places that are great starting points for exploring Hardangervidda – Myrdal, Finnish, Haugastol, Ustaoset iyo Geilo. Waxaad kaloo qaadan kartaa tareen si Voss iyo bas ka Voss in Eidfjord.
#Europeparks #Nationalparks #nationalparkseurope europetravel longtrainjourneys tareen safarka travelbelgium travelgermany safar waddo traveltips